Ao Ejipta, Samy Mbola Mihatra Ao Amin’ny Firenena Ny Herisetra Ara-nofo Sy Ny Fampanambadiana Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Ao Ejipta, Samy Mbola Mihatra Ao Amin'ny Firenena Ny Herisetra Ara-nofo Sy Ny Fampanambadiana Ankizy
Voadika ny 05 Janoary 2018 15:40 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, polski, عربي, Português, Italiano, 繁體中文, Français, Nederlands, नेपाली, English
Vehivavy milahatra mba hifidy tao Ejypta tamin'ny fifidianana parlemantera ny taona 2011. Sary navoakan'ny UN Women tamin'ny 2 Desambra 2011. Nampiasàna ny lisansa Creative Common.
Nanao tatitra i Hala Yousef, Ministry ny Mponina ao Ejypta ny taona 2015, fa ny 15%-n'ny fanambadiana ao Ejypta no fampanambadiana ankizy avokoa. Mbola mitohy hatrany ity tranga ity manerana ny firenena, ary indrindra fa any amin'ny faritra tena mahantra, na teo aza tamin'ny taona 2008 ny fampiakarana ho 18 taona ny taonan'ny olona afaka manambady.
Manampy ny fanitsahana ny zon'ny ankizy, mitarika ho amin'ny herisetra mivantana atao amin'ny ankizy ity fomba fanao ity,izay ankizivavy hatrany ny ankamaroany.
Fanadihadiana iray tamin'ny 2001 no nampiseho fa ny 29 isanjaton'ireo ankizy manambady no mahazo daroka amin'ireo vadiny. Ny taona 2014, ny American University of Cairo's Social Research Center (Ivontoerana Fikarohana Ara-tSosialy ao amin'ny Anjerimanontolo Amerikàna ao Kairo) no nahita fa ny 27 isanjaton'ireo ankizavavy manambady alohan'ny faha 18 taonany no tratran'ny fanararaotana ara-nofo ataon'ny vadiny.
Ankoatr'izay, tao anatinà tatitra iray tamin'ny 2016, nanitsy avy hatrany ny taridresaka iray tao amin'ny UN fa isan'ny mandray anjara amin'ny faharatsian'ny lazan'i Ejipta amin'ny tsy fanajàna ny zon'ny vehivavy ny fanenjehana mafy ireo vehivavy malaza mpiaro ny zon'olombelona :
Mampiorina sy manamafy ny rafitra famoretana bontolo ny tolona ataon'ireo vehivavy Ejyptiana ny fanenjehana tsy ankiato ireo vehivavy mpiaro ny zon'olombelona toa an-dr'i Azza Soliman sy i Mozn Hassan, ikendrena hanampenam-bava sy hampitahorana ireo tsy mitandro hasasarana miasa ho an'ny rariny, ny zon'olombelona ary ny fitoviana
Mba hiatrehana ireo olana ireo, niresahan'ny Global Voices i Samah Mansur, mafana fo Ejyptiana iray izay miasa ho an'ny zon'olombelona efa ho maherin'ny 10 taona izao.
Samah Mansur, mpikatroka mafana fo ho an'ny zon'ny vehivavy Ejiptiana . Sary nahazoana alalana.
Miasa momba ny miralenta sy ny zon'ny vehivavy ao amin'ny Appropriate Communication Techniques for Development Center (ACT) – Ivontoerana ho an'ny Fampitàna Sahaza ho an'ny Fampandrosoana – i Mansur. Mpikambana ao amin'ny fandaharan'asa “Say No To Child Trafficking” – Manaova Tsia Amin'ny Fanondranana Ankizy – vondrona iray mpanaramaso sy mpanangona antontan-kevitra momba ny fanondranana zaza sy fampanambadiana ankizy ao Ejipta. Nanampy tamin'ny fanganana ny fandaharanasa i Mansur mba hisian'ny fahatongavan-tsaina sy ny ady amin'ny herisetra ao Ejipta.
Nahazo maripankasitrahana iray avy amin'ny Tahirimbolan'ny Firenena Mikambana Ho Fampandrosoana ny Vehivavy izy tamin'ny 2007 noho ny fikarohana nataony momba ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy.
Nevena Borisova (NB): Ahoana no fomba niantombohanao niasa ho an'ny zon'ny vehivavy?
Samah Mansur (SM): Nanana tombony aho nipoitra avy taminà ankohonana izay tena manome lanja sy manao ho zava-dehibe ny filatsahana an-tsitrapo. Nino ireo ray aman-dreniko fa ny fanampiana olona ao anaty fijaliana no fanomezana tsara indrindra natolotr'izy ireo ahy. Navela aho handany fotoana maro tamin'ny asa fanasoavana, fanomezana fialofana ho an'ireo kamboty, vehivavy nianjadian'ny herisetra, ary ireo olona miaina ao anaty tsy fahampiana, mihoatra lavitra noho izay nampianarina ahy tany an-tsekoly ary izany no nahatonga ahy ho nanana fitiavana manokana ny asan'ny mpilatsaka an-tsitrapo ataoko ankehitrio. Nanomboka ny taona 2003 aho no niditra tao aminà sehatra iray tsy natao hahazoam-bola antsoina hoe Appropriate Communication Techniques for Development (ACT) izay miady amin'ny karazanà herisetra mianjady amin'ny vehivavy. Tena nanam-bintana tokoa aho satria tena haiko tsara ny misafidy izay ho ataoko ary tena ankafiziko avokoa izay ataoko rehetra.
NB: Mpikambana ao amin'ny fandaharanasa ‘Say No to Child Trafficking’ ianao. Hatraiza ny fahitanao ny haben'ny olana misy ao Ejipta ary inona avy ireo fepetra tokony horaisina?
SM: Tranga ara-tsosialy iray miantraika indrindra indrindra amin'ireo ankizivavy miaina ao anaty fahantrana lalina any amin'ny faritra ambanivohitra ny fampanambadiana ankizy sy fanondranana zaza ao Ejipta, ary tena mipariaka be any andrenivohitra, toy ny any amin'ny Afovoan'i Ejipta. Roa ambin'ny folo isanjaton'izy ireo no manambady alohan'ny faha valo ambin'ny folo taonany. Ireo lehilahy mpanefoefo avy ao Ejipta, sy ny faritra Arabo, ao anatin'izany ireo firenena ao Golfa, no tena fositra lehibe, izay mitsidika matetika an'i Ejipta mba hahazoany “vady vonjimaika na hanao fizahantany mamoafady” (tourism marriages) miaraka amin'ireo zaza tsy ampy taona ireo. Ankizivavy latsaky ny efatra ambin'ny folo taona no terena ho amin'ny fanambadiana. Manamora ireo fanambadiana ihany koa ny ray aman-drenin'ireo ankizivavy, sy ireo mpanera vady, loham-pianakaviana, mpisolovava, mpitarika vondrom-piarahamonina, sns., izay mandray kolikoly mba hanoratana ity fanambadiana tsy ara-dalànan'ny zaza tsy ampy taona ity. Avy eo ireto ankizivavy nanambady ireto lasa tafiditra aminà toerana tena mahonena. Na izy ireo nariana sy bevohoka, natao an-keriny ho lasa mpiasa an-trano any an-tany lavitra, na ny ankamaroany miditra amin'ny fanalana zaza.
Sokajiana ho fanondranana zaza sy fanandevozana maoderina ireto fanambadiana ireto, izay fanerena ireo zazavavy avy nanambady hanao mpiasa an-trano sy mpanompo amin'ny endriny feno fanararaotana ka andraisana karama isam-bolana mandalo amin'ireo mpanera. Mankany amin'ireo ray sy anadahiny tsy an'asa anefa ny volan'ilay ankizivavy..
NB: Nanampy tamin'ny fananganana ny hetsika ‘I Saw Harassment’ (Nahita Fanararaotana Aho) ianao. Afaka milaza misimisy kokoa momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao Ejipta ve ianao?
SM: Olana goavana ao Ejypta ny herisetra amin'ny fanararaotana ara-nofo. Asehon’ ireo fanadihadiana fa efa tratran'izany avokoa ny ankamaroan'ireo vehivavy, indraindray eny an-dalambe na any anaty fitateram-bahoaka. Tena latsa-paka tanteraka ity olana ity. Noho izany indrindra no nandraisako anjara tamin'ny fametrahana ny hetsika “I Saw Harassment” izay mpanaramaso sy mpandrakitra antontan-kevitra momba ireo heloka mahakasika ny herisetra ara-nofo mianjady amin'ny vehivavy.
NBManao ahoana kosa ny momba ny fampivoarana arak'asa ho an'ny vehivahy ao amin'ny firenena ?
SM: Ambany ny laharan'i Ejypta raha raha resaka miralenta. Nosokajian'ny “The 2015 Global Gender Gap Index” ho laharana faha 136 amin'ny firenena 145 manerana izao tontolo izao i Ejypta. Manana salanisa ambany dia ambany ny vehivavy amin'ny fananana asa raha oharina amin'ny lehilahy (26% vs 79%) ary amin'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra (65% ny vehivavy mahay mamaky teny sy manoratra vs 82% ny lehilahy).
Manana vehivavy 89 (14.9%) izahay ao amin'ny parlemanta, ka 14 notendrena ary 65 voafidy.
3 andro izayAzia Atsimo